PressReader - Isolezwe: 2018-09-13 - Zizovuselelwa wumnyango ezabahlengikazi
Zizovuselelwa wumnyango ezabahlengikazi
imali yokubhalisela izitifiketi zokusebenza ngaphansi kweSANC. Imali bayikhokha unyaka nonyaka. Bayifaka ebhange noma baziyele emahhovisi eSANC ePitoli ukuze baqinisekise ukuthi yonke into ihamba ngendlela. Manje imali seyizobanjwa wuMnyango wezeMpilo bese kuba yiwo okhokhela iSANC. Uma bengayikhokhanga noma ifike ingaphelele babhekana nengozi yokungavuselelwa kwezitifiketi zabo zokusebenza.
UNobhala wenyunyana yabahlengikazi, iDemocrartic Nursing Organisation of South Africa (Denosa), KwaZuluNatal, uMnuz Mandla Shabangu uthe basithokozele isinqumo somnyango sokuhambisana nesiphakamiso osekunesikhathi basenza sokuthi kube yibo abangamela uhlelo lokukhokhela ukubhaliswa kwabahlengikazi.
UShabangu uthe lokhu kwenza ukuthi abanye abahlengikazi bagcine bengakwazanga ukukhokha futhi bagcine sebesuswa ohlwini lwabahlengikazi.
Uthe uma lokhu kwenzekile kufanele baphinde bakhokhe imali enkulu ukuze babuyiselwe ohlwini.
“Kuvame ukuthi uma abahlengikazi bengakhokhanga ngenxa yanoma yisiphi isizathu basuswe ohlwini lwabahlengikazi kokunye basuke bekhokhe imali engaphelele. Kokunye balinda isikhathi eside ngoba bezitshela ukuthi bazokhokha uma kuphela unyaka. Lokhu kuzokwenza ngcono izinto ngoba imali izothathwa wumnyango bese kuba yiwo oyikhokhayo,” kusho uShabangu.
Uthe uma abahlengikazi besuswa ohlwini lwabahlengikazi bagcina bengakwazi ukusebenza nokuphazamisa izikhungo zezempilo. Uma beqhubeka nokusebenza basuke bezibeka bona nomnyango engozini yokufakwa amacala.
Kuvela ukuthi uMnyango wezeMpilo uzoqala ukubamba imali kubahlengikazi ngonyaka ozayo.